UmkaNcwane uchaza ngokubhala incwadi ngempilo yabo | Isolezwe
UmkaNcwane uchaza ngokubhala incwadi ngempilo yabo
intandokazi / 8 November 2018, 3:59pm / ZANELE MTHETHWA
UNKOSIKAZI wowayengumculi wowokholo uSfiso Ncwane, * -Ayanda nencwadi yakhe ayibhalile esihloko sithi For the love of Sfiso Ncwane
‘UKUBE ngaphiwa ukucula bengizoqhubeka lapho agcina khona umyeni wami kodwa bekumele ngisebenzise ukubhala ukuze igama lakhe lingafi.”
Lawa ngamazwi kaNkk Ayanda Ncwane ongumfelokazi obegane umculi wowokholo uSfiso Ncwane, osekhiphe incwadi ekhuluma ngempilo yabo.
Le ncwadi esihloko sithi For The Love Of Sfiso Ncwane ikhuluma ngokukhula kwabo nempilo yasemshadweni neyodumo. UNkk Ncwane uthe usebenzise isikhathi sokuzila kwakhe ukuhlanganisa le ncwadi, aveza kuyo ngisho obekungaziwa ngomyeni wakhe.
“Ngikhethe ukusebenzisa isiphiwo uNkulunkulu angiphe sona ukuqinisekisa ukuthi nezizukulwane ezizayo ziyazi ukuthi kwake kwaba noSfiso Ncwane. Ngikhethe ukubhala incwadi ngiqhubeke nemicimbi ebesivele siyenza naye, ngikhiphe nomsebenzi wakhe ahambe engakawukhiphi. Incwadi ikhuluma ngempilo yethu, izinto esidlule kuzona nempumelelo yethu,” echaza.
Uveze ukuthi kwakuyinhloso yakhe noNcwane ukukhipha incwadi uma sebehlanganisa iminyaka engu-10 beshadile, obekuwunyaka odlule.
“Inhloso bekuwukuthi sizokhipha ebesingakaze sikuveze ngempilo yethu ngoba abanye babona kumnandi sesishadile bengazi ukuthi sidlulephi ukusiza abanye abashadile abasebancane. Ngebhadi akwenzekanga kodwa kwasala ijoka lokuthi ngiqhubeke nokubhala incwadi futhi ngakufaka nalokhu esasivumelene ngakho noNcwane,” kusho yena.
UNkk Ncwane okusahlengezela izinyembezi uma ekhuluma ngokushona komyeni wakhe, uthe akalufisi usuku lwangoDisemab 5 okwashona ngalo umyeni wakhe ngo-2016. Njengoba sekusele amasonto ambalwa kufike lolu suku, uthe uyabikelwa ngoba akuvumi ludlule. Ngonyaka odlule uthe walala usuku lonke ezivalele endlini, ekhaliswa nayimiyalezo abeyithunyelwa ngabantu bemduduza. Namanje akanazo izinhlelo ngalolu suku, athe ugubha kuphela usuku lokuzalwa lukamyeni wakhe.
Ekhuluma ngokuzila kwakhe nezinkulumo ezisuke emuva kokushona komyeni wakhe, uthe yizona ezimenze wabhala incwadi. Uthe yize abanye bebemgxeka kodwa ubengeke azivalele endlini unomphelo kodwa bekumele aqhubeke nomsebenzi futhi unesiqiseko sokuthi nomyeni wakhe uyajabula ngalokho.
“Sengiphila izimpilo ezimbili ngoba phambi kwabantu kumele ngiziqinise ngimamatheke ngisebenze ukuze kuphile abantu abathembele kimina. Nginezingane ezimbili okumele ngizondle, obekungeke kungisize ukuhlala ngikhala,” kusho yena.
Uthe ayikho indlela ewumgomo yokuzila futhi asikho isikhathi lapho kuphola khona. Lokhu kumenze ukuthi ahlangane nabanye abafelokazi abasebancane ikakhulukazi emakhaya. Uveze ukuthi abafelokazi bayehlulelwa futhi bayahlukunyezwa ngisho emabandleni nasemindenini yabo. Incwadi isiyatholakala e-Exclusive Books naku-Amazon kanti uhlela nokuyethula ngokusemthethweni maduze. Okumjabulisayo ukuthi indodana yakhe endala ithanda ibhizinisi lomculo bese kuthi encane ikhonze ukucula, athe kumnika ithemba lokuthi ngeke lishabalale igama likaSfiso.